Sonos iyo IKEA waxay diyaarinayaan afhayeen cusbooneysiinaya qaab laambad | Waxaan ka socdaa mac
Sonos iyo IKEA waxay diyaarinayaan afhayeen cusbooneysiinaya qaab nal
Uma muuqato mid aad u dheer tan iyo markii Sonos iyo IKEA ay bilaabeen Sadarka Symfonisk ee ay ku dhajinayaan iftiinka iyo dhawaqa. Munaasabadaas afhayeenka gidaarka buugga sheyga iyo laambad naqshadeeye IKEA oo sifiican uhadlay waxay ahaayeen halyeeyada.
Hadda waxay u muuqataa in labada shirkadoodba ay doonayaan inay ku celiyaan guusha laga gaadhay xariiqdan alaabooyinka ah waxaana la filayaa in qalab cusub oo Symfonisk ah uu reerka la iman doono. Codsi ku saabsan diiwaangelinta FCC ee sheyga IKEA FHO-E1913 wuxuu noqon lahaa jiilka xiga.
Ma jiraan tixraacyo sax ah oo ku saabsan waxa aaladdan cusub ee diiwaangashan ee taxanaha 'Symfonisk' ay noqon karto, waxa u muuqda inay iska cadahay inay tahay wada shaqeyn cusub oo dhexmarta Sonos iyo IKEA. Ma yahay codsi loo sameeyay FCC waa tilmaan cad in shaqadu horumarsan tahay iyo in shahaadooyinka la helay iyadoo sheyga ficil ahaan diyaar u ah inay suuqa aadaan.
Ma hayno taariikh sax ah si aan u xayeysiino sida aynaan u hayn naqshad xadaysa ama sicirka alaabta. Waa macquul inay tahay laambad qaabka ugu nadiifsan ee IKEA, laga yaabee inuu ka yaryahay noocii hore sidoo kalena wuxuu ku darayaa ku hadla tayo leh sida Sonos ama waxay sidoo kale noqon kartaa wax la mid ah Sonos Sub laakiin cabir yar.
Waxaan dooneynaa inaan aragno badeecada ama alaabada ay bilaabayaan tan iyo markii Ururkani marwalba wuu ufiican yahay isticmaalayaasha sababtoo ah qiimaha tayada ay bixiyaan. Xaqiiqdii aaladahaani waxay ku dhamaan doonaan in lagu dhawaaqo ka hor xagaaga laakiin ma jiro wax la xaqiijiyay sidoo kale waa inaan ka taxaddarnaa arrintan oo aan ku sii hormarin saadaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Sonos iyo IKEA waxay diyaarinayaan afhayeen cusbooneysiinaya qaab nal
Khadka: waa Podcast cusub oo Apple ah oo yeelan doona taxane u gaar ah dhamaadka sanadka
Apple's Find My Accessory waxay horey u leedahay barnaamij tijaabo ah